भारत–चीन भिडन्त : तेस्रो विश्वको युद्धको संकेत, भारत भन्दा चीन कति शक्तिशाली ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/भारत–चीन भिडन्त : तेस्रो विश्वको युद्धको संकेत, भारत भन्दा चीन कति शक्तिशाली ?
काठमाडौं । भारत–चीनसँग १ अर्ब ८० करोड भन्दा धेरै जनसंख्या रहेको छ । अहिले यी दुई देशबीच बढेको तनाबले विश्वलाई कहाँ लैजान्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्न सहज छैन । जानकारहरु अब तेस्रो विश्वयुद्ध हुनसक्ने कुराको आंकलन गर्छन् । सोमबार राति दुई देशबीच लद्दाखको गाल्भान उपत्यकामा भएको भिडन्तमा ३ भारतीय सैनिक मारिएको खबर बाहिर आएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको खबर अनुसार ५ जना चिनियाँ सैनिक पनि मारिएका छन् ।
तर चीनले यस बारेमा कुनै जवाफ दिएको छैन । चीनले आधिकारीक रुपमा के कुरा स्विकार गरेको छ भने उनीहरुको तर्फ पनि ठुलो क्षति भएको छ । बेलायतको एक चर्चित पत्रिकाले भारत–चीनबीचको तनाब थप बढे तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुने बताएको छ । एक्सप्रेस डट यूकेले तेस्रो विश्व युद्धको सुरुवात शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । यस बेलायती अखबारको अनलाइन संस्करणले भारत–चीन द्वन्द्व तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात हो भनेर वर्णन गरेको छ । उक्त समाचारले भने कि लद्दाखको गाल्भान उपत्यकामा एक भिडन्तमा एक भारतीय सेनाका अधिकारी र दुई सैनिक मारिएपछि यस्तो बताएको हो ।
जबकि रक्तपातपूर्ण नरसंहारको जवाफमा पाँच जना चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । दशकहरूमा यो पहिलो दुर्घटना हो जुन आणविक शक्तिले छिमेकीहरू बीच टकरावको परिणाम स्वरूप रिपोर्ट गरिएको छ । यद्यपि चीनले घाइतेहरुको मृत्यु वा संख्या पुष्टि गरेको छैन । अमेरिकी सेनाका सेवानिवृत्त कर्नल लरेन्स सेलिनले उद्धृत गरेको ट्वीट समाचारमा चीनले भारतसँग खेल्नु हुँदैन भनिएको छ । उनले भने, ‘यो दुखद क्षतिको बावजुद भारतीय सेनाले चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका आक्रमणकारीहरुलाई दण्डित गरेको छ।’
विश्वका चर्चित सञ्चारमाध्यमहरु इजरायल टाइम्स, न्यूयोर्क टाइम्स, बीबीसी, अलजजीरासहित सबै प्रमुख मिडियाहरुले भारत र चीनबीचको तनावलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा दुई आणविक अर्थात परमाणु शक्ति सम्पन्न देशहरुबीच भइरहेको तनाव आफैंमा डरलाग्दो रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा भारत भन्दा चीन धेरै कुरामा अगाडि रहेको छ । सैनिक संख्याको कुरा गर्दा चीनसँग झण्डै २२ लाख सैनिक रहेका छन् ।
तर अर्को तिर भारतसँग झण्डै १४ लाख सैनिक रहेका छन् । परमाणु शक्तिको कुरा गर्दा संख्याको आधारमा भारतको चीनसँग तुलना हुँदैन् । भारत पाकिस्तान भन्दा पनि पछि रहेको छ । भारतसँग अहिले १५० वटा परमाणु बम रहेका छन् । उता पाकिस्तानसँग १६० रहेका छन् । तर चीनसँग अमेरिकासम्म मार हान्न् सक्ने परमाणु बमसहित ३२० वटा रहेका छन् । परमाणु शक्तिको कुरा गर्दा विश्वमा सबैभन्दा धेरै रुससँग र त्यसपछि अमेरिका रहेको छ । रुससँग अहिले ६ हजार ३७५ वटा रहेका छन भने अमेरिकासँग ५ हजार ८०० रहेका छन् ।